Rafitra fitehirizam-bokin'ny ranomandry China an'ny orinasan'ny Ice Bank sy mpanamboatra | Chemequip
Ny banky ranomandry dia misy takelaka ondana nohosorana lasantsy maromaro izay mihantona ao anaty fitoeran-drano iray misy rano. Ny banky gilasy dia manala ny rano ho ranomandry amin'ny alina miaraka amin'ny vidin'ny herinaratra ambany, ho faty amin'ny antoandro rehefa mihabe ny vidin'ny herinaratra. Hitsonika ao anaty rano ranomandry ny ranomandry izay azo ampiasaina hampangatsiaka ny vokatra ankolaka, mba hialanao amin'ny faktioran-jiro lafo vidy.
Inona ny banky ranomandry?
Ahoana ny fiasan'ny ranomandry?
Ao amin'ny banky ranomandry, ny rano dia totofana ao an-tampon'ny evaporator ary mikoriana malalaka amin'ny faritra ivelany misy ny takelaka evaporator. Ny vata fampangatsiahana dia alefa amin'ny vata anatiny ao amin'ireo lovia evaporatora, manangana ranomandry matevina mitovy amin'ny etona ivelany amin'ny lovan'ireo evaporator.
Inona no ilana ny banky ranomandry?
Ny banky ranomandry anay dia fitaovana fitehirizana ranomandry azo ampiharina ary azo ampiasaina betsaka amin'ny fampangatsiahana sy ny fampangatsiahana isan-karazany:
(1) Ny banky ranomandry dia azo ampiasaina betsaka amin'ny famokarana rano mangatsiaka avy amin'ny ranomandry voatahiry ho an'ny fitahirizana voankazo sy legioma
(2) Ny banky ranomandry dia azo ampiasaina betsaka amin'ny famokarana rano mangatsiaka ho an'ny trondro hazandranomasina sy fitehirizana hena.
(3) Ny banky ranomandry dia mamokatra ny ranomandry ho an'ny vokatra vaovao
(4) Ny banky ranomandry dia mamokatra ranomandry amin'ny alina ary mampiasa azy amin'ny rano hanodinana akoho amam-borona
(5) Ny banky ranomandry dia azo ampiasaina amin'ny indostrian'ny sakafo ankapobeny
Ny tombony azontsika amin'ny banky gilasy?
(1) Ny banky ranomandry dia mampiasa ny herinaratra avo indrindra amin'ny alina ho an'ny fananganana rafitra ranomandry ary noho izany dia voatahiry angovo.
(2) Ny takelaka mangatsiaka lovia ondana an'ny banky ranomandry dia manana ny fananganana embossed, izay miteraka fikorontanana goavambe mba hahatratrarana ny fahombiazan'ny famindrana hafanana ambony kokoa ho an'ny fanamafisana haingana sy fananganana ranomandry.
(3) Ny banky ranomandry ny takelaka ondana 304 na SS316L takelaka misy onja dia misy fanoherana avo kokoa noho ny vidin'ny fikolokoloana ambany
(4) Ny banky ranomandry dia azo amboarina amin'ny habe sy ny endriny amin'ny fangatahan'ny mpampiasa.
(5) Ny takelaka mifanila amin'ny sisin-dranomandry misy elanelana lehibe dia mora be amin'ny fanadiovana
(6) Ny banky ranomandry dia manana fahaiza-manao namboarina lehibe miaraka amina compresseur kely fotsiny
Ny fitaovana famokarana anay ho an'ny takelaka ondana misy banky ranomandry
Ny fampisehoana vokatra banky ranomandry vita amin'ny takelaka ondana:
Ny banky ranomandry antsika dia azo ampiharina amin'ny rafitra fitehirizana ranomandry.
Fampisehoana video an'ny banky ranomandry anay
Previous: Fahombiazana avo lenta -gas hafanana mpanamboatra hafanana vita amin'ny takelaka ondana
Manaraka: Milina fanala plate miaraka amin'ireo evaporator an'ny takelaka ondana
Banky ranomandry coolant plate
Banky ranomandry dimple
Banky ranomandry voavonjy angovo
Banky gilasy misy etona
Banky gilasy mangatsiaka mangatsiaka
Chiller labiera amin'ny ranomandry
Fitehirizana angovo banky ranomandry
Banky gilasy ho an'ny HVAC
Banky gilasy Vy vy vy tsy miova
Cooler ronono ranomandry
Fangatsiahana hazan-dranomasina any an-dranomasina
Cooler rano amin'ny banky ranomandry
Rafitra ranomandry ranomandry rano
Banky gilasy vita amin'ny lasopy laser
Banky ranomandry mangatsiaka ronono
banky ranomandry vata fampangatsiahana alina
Banky gilasy lovia lovia
Plate coil banky ranomandry
Ny takelaka dia mihodina amin'ny banky ranomandry
banky ranomandry Temp
Masinina ranomandry slurry indostrialy, Masinina ranomandry ranoka, Exchanger hafanana takelaka, Masinina ranomandry slurry ara-barotra, Stainless vy Dimple palitao , Milatsaka sarimihetsika rano chiller ,